Sida loo cusbooneysiiyo Xusuusin Lenovo K3 ilaa Android 5.1 | Androidsis
Francisco Ruiz | | Lenovo, ROM, Tababarada
Horaan uga faallooday keligay Dib-u-eegista Xusuusin ee Lenovo K3 in ay ahayd ikhtiyaar iibsi aad u wanaagsan markii la helayay terminal cusub oo Android ah oo leh farsamooyin farsamo oo aad u wanaagsan, naqshad wanaagsan iyo sawir wanaagsan iyo kamarad fiidiyoow ah. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale sheegay suurtagalnimada awood u leedahay inaad rakibato TWRP Recovery iyo sidoo kale inaad wareejiso hab fudud oo ka yimid Windows mahadnaqa bulshada firfircoon ee firfircoon ee Android ee ka dambeysa boggan xiisaha leh ee Android.
Qoraalka maanta, sida aad ku aragto fiidiyowga qaybta sare ee maqaalkan, waxaan ku tusayaa sida loo sameeyo cusbooneysii Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1 Thanks to Rom la kariyey oo ku saleysan gebi ahaanba dhismaha rasmiga ah ee Lenovo ee 1526 oo si fiican loogu habeeyey Lenovo K3 Note mahadsanid FeyoMx Adeegsiga VIP ee DualSIM forum mobile. Markaa hadaad rabto inaad cusboonaysiiso Lenovo K3 Note-kaaga xiisaha leh ka qaad dhammaan barnaamijyada qashinka ah Lenovo isla mar ahaantaana kordhin mugga terminaalka Wax badanna ka hel, waxaan kugula talinayaa inaadan ka maqnaan fiidiyowga ku lifaaqan halka aan ku tusayo habka rakibaadda tallaabo tallaabo ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhinacyada xiisaha leh ee Rom-kan xiisaha leh ee loogu talagalay Lenovo K3 Note.
1 Astaamaha Android 5.1 Rom ee loogu talagalay Lenovo K3 Note
2 Shuruudaha laga rabo in la buuxiyo si loo cusbooneysiiyo Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1
3 Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1
4 Sida loo cusbooneysiiyo Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1
Astaamaha Android 5.1 Rom ee loogu talagalay Lenovo K3 Note
Gapps 5.1 & arm64 ee Google
Lspeed2.2 ee Paget96
Saacada hufan ee droid27
VLC loogu talagalay android by VideoLAN
AdFree waxaa qoray BigTinCan
Terminal loogu talagalay android
App Music ah oo aan Shiineys lahayn
Barnaamijka Jadwalka bilaa Shiine ah oo iswaafajinaya
Barnaamijka FM-ga oo aan Shiineys ahayn
Tarjumaadda Macallinka <T
Hagaaji SD si looga fogaado xaddidaadda qorista
Boot animation aan lahayn xarfaha Shiinaha.
Qaybta ugu habboon ee dareenkan xasaasiga ah Rom waxaa abuuray FevoMx, waa wax cajiib ah horumarin lagu gaarey mugga ugu badan ee ku hadla af-hayeenka dhinaca dambe ee Lenovo K3 Note, awood mug leh oo warshaddii asalka ahayd ee Rom ka tagtay wax badan oo la doonayay, sidaa darteedna ay ficil ahaan aan macquul ahayn in la maqlo ogeysiisyada la helay ama wicitaannada ku saabsan deegaanno buuq yar, iyo in ka badan haddii aan haysanno ku keydsan jeebka, boorsada, boorsada, iwm.
Dhinaca kale waxay la timaaddaa - barnaamijka muusikada asalka ah ee Lenovo, Raadiyaha FM-ka, is-dhexgalka keydinta batteriga ee casriga ah iyo is-baddallo badan oo loogu talagalay a waxqabadka terminal cajiib ah.
Shuruudaha laga rabo in la buuxiyo si loo cusbooneysiiyo Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1
Hayso qaabka Lenovo K3 Note K50-t5.
Hayso terminal-ka xididdada leh oo rakibidda TWRP Recovery.
Soo celinta Nandroid backup nidaamka hadda jira oo dhan.
Kaydinta xijaab EFS, haddiiba ay dhacdo !!. Tani waxaan ku bari doonaa inaad ka sameyso MobileUncleTools.
Kaydinta dhammaan codsiyadayada iyo xogta aan hayno.
Dib-u-hagaajinta USB-ga ayaa la shaqeeyay ka soo dejinta
Batariga lagu soo oogay 100 x 100 ee awoodiisa
Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1
Faylasha loo baahnaa cusbooneysii Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1 waxay ku egyihiin kaliya hal feyl ah oo la cadaadiyey qaabka Zip qoo aad ka soo dagsan karto isla isla xiriiriye miisaankiisuna yahay 836 mb. mar la soo dejisto, waa inaan nuqul ka sameysanno adigoon ku sii deynin xusuusta gudaha ama dibedda ee Lenovo K3 Note iyo dib ugulaabasho Xaaladda Soo-kabashada u soco sida soo socota:
Sida loo cusbooneysiiyo Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1
Fiidiyowga ku lifaaqan cinwaanka maqaalkan adiga Waxaan si tartiib ah u sharxayaa dhammaan geeddi-socodka iftiiminta Rom, Hillaac biligleynaya oo ku xaddidan dib-u-bilaabista Xaaladda Soo-kabashada raac tilmaamahan kooban:
Waxaan aadeynaa xulashada Tirtir, Cabbirta saafiga ah oo waxaan doorannaa dhammaan xulashooyinka marka laga reebo waddada aan ku haysanno Rom, haddii ay tahay gudaha ama dibedda xusuusta kaydinta waa in aynaan dooran.
Waxaan u jiidaneynaa baarka si aan u fulino ficilka la codsaday.
Hadda waxaan tagnaa ikhtiyaarka Ku rakib oo waxaan u marnaa dariiqa aan ku nuqulno santuuqa Rom. Markaan halkaa tagno, waan dooranay oo waxaan u wareejinnaa baarka markale si aan u fulino ficilka la codsaday.
Ugu dambeyntiina, haddii terminaalku uusan dib u bilaabin, waxaan dib uga bilaabi doonnaa oo keliya xulashada reboot y System.
Hadda waxaad diyaar u tahay inaad habeysid terminalkaaga cusub ee Android, tan Lenovo K3 Xusuusin La cusbooneysiiyay Android 5.1 Lollipop.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Lenovo » Sida loo cusbooneysiiyo Lenovo K3 Note ilaa Android 5.1 adoo adeegsanaya Rom la kariyey oo ku saleysan dhismaha rasmiga ah ee 1526
Mahadsanid!! wax walba aniga way ii shaqeeyeen si la mid ah fiidiyaha, si fiican ayaa loo sharraxay
Tababar aad u fiican, wax walba si cad ayaa loo sharaxay. Aad baad u mahadsan tihiin sidoo kale waad ku mahadsan tihiin bulshada MDS. Salaan.
Aad baad u mahadsan tahay, dhammaantoodna waa iska cad yihiin. Waxay u shaqeysay si qumman.
Ku jawaab Carlos Osorio
Dhamaan waa weyn yihiin, laakiin waqtiga guriga iyo saacadda widget (wareega wareega shaashadda weyn), waxaa jira cayayaan aan ii oggoleyn inaan doorto magaaladeyda oo aanan isticmaalin goobta GPS xitaa marka la daarayo, in la beddelo goobta aan ku jiro, taas oo saameysa ogaanshaha aqoonsiga lambarka maxalliga ah iyo waqtiga. Maxaa dhibaatadan ama sida loo xaliyay.
Ku jawaab Agusnell
Waa taleefan weyn, wuxuu shaqeeyaa Wanaagsan! Ku dhowaad wax walboo sifiican ayey u shaqeynayeen, boostada iyo fiidiyowga ayaa sifiican u sharaxay sida loo sameeyo… wax yar… maadaama aan rakibay 5.1 Ma dhigi karo dhawaaq shaqsiyeed xiriir kasta… ha ii sharaxo… Waxaan aadayaa xiriirka aan dhigay codka la doonayo iyo sida ku xusan macluumaadka xiriirku waa inuu dhawaqaa dhawaaqa ... si fiican maya, waxay u egtahay mid guud ahaan dhammaan xiriirada si xiise leh sidoo kale shaqsi ahaan loogu shaqeeyay. Waxaan isku dayay wax walba ... Ma ka fikiri kartaa amaan ???
Jawaab David VV
Waad salaaman tihiin, wax walboo sifiican ayey u socdeen bilowgii (markii aan sidan sameeyay kama haysto taleefanka la'aantiisa) laakiin waxay umuuqataa in howshan oo dhan ay moobilkeyga uga tagtay bilaa calaamado, waxaan horeyba isugu dayay dhowr iyadoo aan jirin waxna, iyo sidoo kale Waxaan isku dayay inaan gacanta ku habeeyo shabakada waxayna ii sheegtaa inaysan macquul aheyn isku xirnaashaha iyo inaan iskudayo mar dambe, ka sokow, xitaa mahelo shabakada cad ee Colombia, xal miyaa jira?
Waxaan leeyahay mid isku mid ah laakiin waxay dhibaato ku leedahay liiska xiriirka, sidee adiga kuu tahay? si fiican ayuu ula shaqeeyaa si cad oo movistar ah? nidaamku ma shaqeeyaa?
Fiiri, waxaan haystaa K3 oo leh nooca VIBEUI: V2.5_1512_5.495_ST_K50-T5
Muhiimadu waxay tahay markaan bilaabayo kumbuyuutarkeyga, waxay umuuqataa xarfaha Shiinaha oo saafi ah aad ayeyna u adagtahay in la ogaado taas oo ah xulashada saxda ah.
Sideen ku ogaan karaa ikhtiyaarka aan dooran karo aniga oo aan khatar gelin?
Fadlan kaalmadaada ... Ma awoodin inaan baabi'iyo dhammaan qashinka ku jira codsiyada Shiinaha ee iyagu dib isu cusbooneysiiya, is cusbooneysiiya ... iwm ...
Ugu horreyntii ROM-kan wuxuu leeyahay cayayaanno badan iyo barnaamijyada asalka spyware. Sida muuqata terminal-kaaga wuxuu adeegsanayaa ROM asal ah laakiin hada ayuu bilaabay taleefanka wuxuu kaa codsanayaa inaad doorato luqada udhaxeysa Ingiriiska iyo Shiinaha. Laakiin haddii waxa kaliya ee aad arkaysaa ay yihiin Shiineys, xidid taleefankaaga, in kasta oo haddii aad ku iibsatay amazon ama ebay, horayba loo jaray, waa inaad dalbataa nidaamka rakibidda soo kabashada twrp ee lagu sharraxay daabacaddan iyo voila ... waad rakib Kaarka SD ee romerka Francisco Ruiz (Xancin's AOSP) wuxuu soo jeedinayaa inuu runtii aabe u yahay terminalkan iyo voila…. Waxaad haysan doontaa warqad k3 oo bilaash ah oo ka mid ah codsiyada Shiinaha, laakiin ha rakibin noocaan 5.1.
Wanaagsan, aad ayaad u mahadsantahay Agunsell, marka waxba ma rakibo… maxaa yeelay markaan dib u bilaabo oo aan doorto Isbaanishka, 92% wuxuu ku hadhayaa Isbaanishka, oo leh 4% Ingiriis ah iyo 4% Shiine ah b laakiin aniga waan la noolaan karaa that. Waxa aanan jeclayn, waa codsiyadaas Shiinaha ah ee ay keeneen lamana saari karo ... waqtiguna sidoo kale wuu igu dhacaa, waxaan dooran karaa oo keliya magaalooyinka Shiinaha, iyo is-aqoonsiga magaaladu ma shaqeynayo xitaa iyadoo GPS la shaqeynayo ...
Waad soo dhaweyneysaan ... rakib AOSP ROM-ka oo uu ku sharaxay Francisco halkan isla goobtaan isla bartaas oo wey fiicnaan doontaa. Waa mid aad u nadiif ah oo hufan
Haye Cristian, ma sameysan kartaa nuqul romkaaga oo dhajin kartaa? Aad baan u qadarin lahaa.
Waad salaaman tahay, markii aad furaha sirta ah ee wifi-ga aadan dhigin gebi ahaanba ... hubi 🙂
Ku jawaab Golfonauta
hello waxay ahayd cajiib. Hadda waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo haddii aan ku rakibo karo xposed lollipop 5.1 in lenovo k3 note with 5.1 iyo haddii aad ka sameyn karto fiidiyow rakibidda mahadsanid wax walba
YDayaanna s dijo
Way qumman tahay laakiin gps-kayga aniga ima shaqeeyo
Gacaliye, waxaa gabi ahaanba lagu qori karaa Isbaanish. Sidee loo helaa cusbooneysi otomaatig ah ee nidaamka qalliinka?
Mahadsanid. Salaan ka timid Guayaquil, Ecuador
Jawaab Wiston Gonzalez
Anselm Yuusuf dijo
Dhammaanba si aad u fiican, laakiin markii la furayo ZIP-ga waxay ii sheegaysaa inay leedahay saxeex saxeex ah, markaa ma cusbooneysiinayso, inkasta oo ay leedahay in ZIP-ka la soo dejiyey Salaan
Jawaab Anselmo Jose
ku dhexjiro nidaamka TWRP, xulashada rakibida, laakiin feylka .zip lama arko, maxaan sameeyaa, rakibaa barnaamijka akhristaha .zip ama ku faafaa gal gudihiisa? fadlan caawi
Ku jawaab matiasbriones
dibi shiine ah dijo
Dhammaan way wanaagsan yihiin, laakiin waxay u muuqataa IMEI IMIIL ah, sidee baan ku soo ceshan karaa?
Ku jawaab chinotoro
mar labaad, wax walba si sax ah ayaan u sameeyay sidii ay uga soo baxayeen casharrada oo ay ku fariisanayaan shaashadda guriga lenovo android. wax baad ka ogtahay. maxaa yeelay waqtigan xaadirka ah iima oggolaaneyso inaan dib ugu laabto nidaamka dib u soo celinta warshadda si aan mar labaad isugu dayo nidaamka oo dhan, fadlan caawi !!
Mid ka soo iibso china dx.com, waxay igu yiraahdeen ma qaadan doono 4G maxaa yeelay mowjadahaasi ma jiraan. Taas wax baad ka ogtahay. Waxaan ka imid Claro oo reer Argentina ah. Mahadsanid kun! luisbondaz@gmail.com Waan ku faraxsanahay haddii qof wax yaqaan. Mahadsanid !!
Jawaab Luis Bondaz
Inaad wax badan ka qoomameyso wax kaa tari maayo. Claro Argentina waxay isticmaashaa kooxaha 4 (1700 / 2100MHz) iyo 28 (700MHz). Moodelkan, Xusuusin K3, wuxuu la jaan qaadayaa kooxaha 1, 3, 7, 38, 39, 40 iyo 41. LTE ee FDD iyo qaabka TDD dhammaan baandooyinka ay taageerto
Luis Waxaan ku hayaa halkan Argentina, 4G ma shaqeyneyso mana shaqeyn doonto sababo la xiriira inta jeer ee kooxo halkan lagu isticmaalo, sida Agusnell kuu sharxayo.
Ku jawaab lolopillud
Paul Molina dijo
Waad salaaman tahay Luis, waxaan rabaa in aan iibsado isla taleefankan gacanta, sidoo kale waxaan ka imid Argentina, ma ii sheegi kartaa khibradaada aad ku leedahay, aragtidaada isii, mahadsanid.
Jawaab Pablo Molina
Dhammaan waa qumman yihiin. Waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan.
Jawaab TXO !!
Waad salaaman tahay, shalay waxaan helay moobilkeyga waxaanan heystaa waxyaabo Isbaanish ah iyo waxyaabo ku qoran af Ingiriis, tani waxay u adeegtaa inaan wax walba ku dhajiyo Isbaanish, sidoo kale waxaan helayaa xayeysiin ama waxaan jeclahay inaan siiyo bog ama fiidiyoow ayaa la ciyaaray, ma ogi inay caadi tahay Start .bilow inaad sameyso waxaad kuhadasho fiidiyowga talaabada ugu horeysa ee fashilantay ... markaan siiyo ikhtiyaarka reboot waxay ii sheegaysaa inay wax khaldameen !, horayna uma dhaqaaqi karo ... oh iyo wax kale .. Ma haysto badhanka menu-ka .. Waxaan rajeynayaa inaad caawin karto mahadsanid!
Waad salaaman tihiin marka hore, waad ku mahadsan tihiin macluumaadka, wax walbana sifiican ayey iigu socdeen marka laga reebo waqtiga widget iyo saacada bilowga (wareega wareega shaashadda weyn), waxaa jira cayayaan aan ii oggoleyn inaan xusho magaaladeyda oo aanan isticmaalin meesha ay ku taalo GPS, Raadiyaha iima ogolaanayo inaan duubto muusigga walina wax ingiriisiga kujira ayaa jira laakiin hadii kale, dhawaqa uma muuqdo inuu kafiicanyahay ama ma aqaano sida wanaagsan ee loo waafajiyo. Aad baad u mahadsan tahay haddii aad i siin karto wax tilmaamo ah
Jawaab Aurelio Yanguas
Aad ayaad u mahadsantahay, si dhakhso leh ayaan u qabtay oo si fiican ayey u shaqaysaa Codku waa mid cajiib ah oo dhakhso badan ayuu u socdaa
Wuxuu la joogayaa weji buluug ah mana dhammeeyo bilowgiisa
Wanaagsan, waxaan raadinayaa roms si aan u cusbooneysiiyo lenovo k3, iyo dhammaan inta aan arkay shaki ayaa iga dhexeeya tan, iyo Xancin AOSP.
Waxaan jeclahay qaybta muuqaalka ee kan kale, iyo inay ku saleysan tahay asalka asal ahaan barnaamijyada asalka ah.
laakiin waxay i siineysaa dareenka ah in midka kale uu ka xasilloon yahay, oo aad ugu habboon yahay waxqabadka taleefanka, inkasta oo uusan xitaa keenin kamaraddii asalka ahayd, iyo waxyaabo yar ..
Marka laga reebo wax walba, waxa aan doonayo ayaa ah in taleefanka si lama filaan ah mar uun u muujiyo wax ku qoran luqad kale oo aan Isbaanish ahayn.
Aniga ahaan waxqabadka ugu fiican waa AOSP, laakiin garaaf ahaan waa Xancin. Ugu dambeyntiina waxaan la joogay AOSP
Hambalyo, horey waxaan usameeyay dhamaan talaabooyinka wax walbana wey ila shaqeeyeen. Laakiin iyagu ma doonayaan inay i siiyaan xogta moobilka ee Kolombiya, laakiin weli waxaan hayaa calaamado oo waan wici karaa laakiin xogtu wax lacag ah igama qaadi doonto. Waxaan ka imid colombia medellin.
Waxaan ahay heer sare !!!
Habeen wanaagsan markasta oo aan isku dayo inaan soo dejiyo Zip-ka si aan ugu rido terminalkeyga waxay iga dhigeysaa inaan xirmo dhamaadka, sidee baan u xallin karaa?
Ku jawaab rogelio
Waad salaaman tihiin, maalmo kahor waxaan helay mobilka oo aan raacayo talaabooyinka shabakada waxaan ku guulaystay inaan xidido oo aan dhigo android 5.1 rom. Xaqiiqdu waxay tahay in aan ku arkay in xulashada codka (wicitaan iyo farriimo labadaba) aanan dooran karin "aamusnaan" shaqsi ahaan, aniga oo ku qasbaya in aan aamusiyo moobaylka gebi ahaanba. Barnaamijyada (sida WhatsApp, tusaale ahaan) isla waxbaa dhaca, ikhtiyaarka ah "aamusnaanta" kama muuqato liiska xulashada markii la dooranayo cod. Ma jirtaa wado lagu sameeyo tan romankan? Mahadsanid.
Ku jawaab Soma
Maxaa la samayn karaa markii kaydka aan la samayn illowgii dartiis?
Ku jawaab Oscarín
Waxaan haystaa xididka Xancin, waana qumman yahay, waxa kaliya ayaa ah inaanan garanayn inay ka timid hawl wadeenkayga (euskaltel), mise waa dhibaato inaan arko in taleefanku xidid yahay ... markaan isku dayo si loo sameeyo wifi port, way isku xiraan laakiin ma gudbinayaan Xogta si ay u awoodaan inay dhex socdaan, ma kugu dhacday adiga? Ma leedahay xal?
Way igu dhacday aniga, waxaan ku xalliyay anigoo beddelaya cinwaanka DNS ee isku-dubbaridku u keenayo qaab ahaan loogu talagalay google. Sidaa darteed waa inaad gashaa qaabeynta oo aad bedeshaa qiimaha. Taasi waxay xalisay isla dhibaatadaas aniga. Hawl wadeenadu mararka qaarkood way iska ilaaliyaan isticmaalka aan xadidnayn ee DNS ujeedooyinka diiwaangelinta. Rajaynaynaa inay adiga kuu shaqeeyaan.
Qofkasta ma leeyahay isku xirka ROM ROW ee terminal fadlan?
Nico wuxuu hubiyaa xiriirka RAW ROM-ka ee vibeui.com waa 90% Shiine ah iyo 10% Ingiriis… kuwani waa kuwa asalka ah ee leh isku xirka Vibe UI 3.0 oo ah kan ugu
Mahadsanid Agusnell, laakiin waxaan dhihi jiray ROM-ka caalamiga ah, kan keena Isbaanishka, macno malahan hadii ay tahay nooc duug ah
Ma lagu rakibi karaa Lenovo A850?
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado kahor isku dayga iyo ceebaynta qolkayga
Genius!, Aad u fiican! hada seeeeeeeeeeeeeeeee !!!!… Waxaan ku imid Kuuriyaan-Isbaanish !!!!
Waad salaaman tahay, sidee ku ogaan karaa in taleefankeygu horey u rujin yahay?
Ugu jawaab Nicholas
Ka soo deji Root Checker dukaanka Play-ka barnaamijkaas ayaa kuu sheegi doona.
ulise willians dijo
Waad salaaman tahay saaxiib, waxaan kuu sheegayaa inaan ku jiro dhibaato aad u daran
soo iibso moobilkan oo ay la socoto android 6.0 oo ku buuxsan Ingiriis iyo Shiine.
Runtu waxay tahay anigu waxba kama rakibi karo google oo mobilada ayaan ku haystaa warqad.
haddii xal loo heli lahaa taas
Jawaab u bixiyeyaasha ulises
Waxaan kujiraa isla ulises, hadaad hayso macluumaad ku saabsan sida loo saxo waxaan ku weydiinayaa fadlan ila wadaag
Runtii dhibaato isku mid ah ayaan qabaa, laakiin cusbooneysiintu waxay ku imaaneysay 6.0 anigoon ogeyn waan aqbalay, maadaama vibeui ay ku jirtay shiineys, waxaan jeclaan lahaa inaan dib ugu laabto 5.1 laakiin ma aqaano sida loo sameeyo, haddii aad hayso macluumaad mowduuca waan ku qanacsanahay hadaad la wadaagto, aad baad ugu mahadsantahay
Waa salaaman tahay, waxaan hayaa dhowr taleefan oo lenovo k3 ah oo dhammaantood lagu iibsaday ebay, waxaan ka imid Argentina. Kii iigu dambeeyay ee aan iibsaday wuxuu la yimid Android 5.1 waana kan kaliya ee aanan ka heli karin goobaha xogta. In kasta oo dheriga aan loo oggolayn inuu soo galo. Mana arko barnaamijyada ku yaal Settings. (Looma liis garaynin barnaamijyadooda ama barnaamijyadooda). Ma jiraa qof dhibaatadan soo maray ama yaqaan sida loo xaliyo?
Kaliya waxaan dhigay android 5.1 taleefankayga oo si fiican ayey u shaqeysaa. Dhibaatada i haysata ayaa ah in gurigeyga kaliya aan haysto caymis 2g ah kiiskanna wuxuu ii ogolaanayaa kaliya inaan doorto qaab otomaatig ah. Aniga sidoo kale iima shaqeyso: * # * # 4636 # * # *. Eeg haddii qof iga caawin karo dhibaatadan. Aad baad u mahadsantahay.
sxb waxaan cusbooneysiiyay qoraalkayga lenovo k3 5.1 ilaa 6.0 si qalad ah tan iyo markii vibeui uu ahaa shiine, laakiin cusbooneysiintan ayaa kaliya kuqoran ingiriis iyo shiino waxayna keeneysaa barnaamijyo badan oo shiineys ah oo aanan fahmi karin, marka lagu daro taageerida playstore, waxaan jeclaan lahaa ogow haddii aad dib u laaban karto cusbooneysiinta ka dib ama waa in ay xidid tahay si ay ugu celiso nooca warshaddeeda aad baad u mahadsantahay aad u badan! Nooca vibe ui ayaa sidoo kale loo cusbooneysiiyay VIBE UI V3.1_1614_5.294.1_ST_K50-T5 waxaan rajeynayaa inaad caawin karto aniga horay ayaan u mahadsanyahay aad iyo aad 😀
Lemines Valentine dijo
Waxaan ku dhaganaa bilowgii weji buluug ah, kama dhaqaaqo halkaas
Jawaab Valentin Lemes
Waa salaaman tahay, iyadoo romkaankan lagu rakibay si lama filaan ah kamaradaha ayaa joojiyay inay shaqeeyaan. Kaliya wejiga hore ayaa shaqeeya sawirkiina waa la rogay.
hello, marka wax walba way kufiican yihiin rakibaadda, laakiin markaan rabo inaan badalo qaabka qallooca (mil, spin, iwm ...) waxay igu tiraahdaa nasiib daro, lenovo launcher ayaa istaagay. Oo weliba waxay ahayd qiyaastii 15 maalmood tan iyo markii wifi ii sheegayo inuu xiran yahay laakiin uusan i siinaynin internet-ka, hawsha habeenkiina mar dambe iman mayso, taas oo ka dhigaysa shaashadda mid madow si uu si fiican wax ugu arko madow oo aan lahayn iftiin badan.
Subax wanaagsan, waxaan ka imid Argentina. XUSUUSNAHAYGA LENOVO K3 wuxuu la yimaadaa android 5.0 waxaana rabaa inaan cusbooneysiiyo 5.1 maadaama aysan ii oggoleyn inaan iskiis uga cusbooneysiiyo goobaha, waa inaan ku sameeyaa gacanta. Terminalkani ma nabad baa? Telefoonkaygu waa badh Shiine nus Isbaanish ah.
Jawaab Tania Belen
muuse ​​nahuelhual dijo
Waad salaaman tahay, saaxiib, waxaan sameeyay wax walbo oo talaabo talaabo ah si aan ugu cusbooneysiiyo android 5.1 mana ii ogolaato inaan sidaas sameeyo.
E: FILE ZIP WUXUU MUSUQAY!
khalad biligleynaya zip / sternal sd ...
Jawaab moise nahuelhual
Waad salaaman tahay, qaali, waxaan u raacay casharrada talaabo talaabo ah, waqtiga la rakibayo vibeui .. wuxuu bilaabmayaa bn laakiin xoogaa ka dib qalad ayuu tuurayaa rakiibkuna ma dhamaan .. maxaan sameeyaa
Ku jawaab Moi Nahuelhual
Marcos Cahue dijo
Dadku horay ayey wax walba u soo dejiyeen laakiin waxay rabaan inay rakibaan TWRP, rakibiddu waxay bilaabmaysaa laakiin shaashadda samadu waxay leedahay sugitaanka aaladda oo halkaas ayay ku xiran tahay….
Jawaab ku bixi Marcos Cahué
Waxaan rakibay qolkan taleefankayguna kama shaqeeyo makarafoonka wicitaanada iyo makarafoonka raadinta google. Qof ma i caawin karaa oo wax ka beddeli karaa makarafoonka xulashada injineernimada mana shaqeyneyso. Ama waxay isiin karaan qiyamka warshadeed ee aanan koobiyeyn.
George M. dijo
Wanaagsan, waan rakibay waana wax weyn.
Aad iyo aad baan kuugu mahadnaqayaa dadaalkaaga
Jawaab Jorge M.
Waad salaaman tahay «k50 t3s»?
Ku jawaab errrr
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa su'aal. Tani waxay u shaqeysaa nooca Lenovo k3 note k50-t5
Waxaan sameeyay wax walba oo qumman, way ii shaqaysay 2015.
Waxaan sameeyay keyd, waxaanan doonayay inaan soo celiyo, waa la soo celiyay laakiin markii dib loo bilaabayo kabaha kama furna laakiin way soo noqotaa oo waxay ku noqotaa TWRP marar badan.
Maxaan khalad ku sameeyaa dib u soo celinta? Ma inaan ku doortaa ikhtiyaar kale TWRP?
Dhamaadkii waa inaan dib ugu noqdo WIPE-ga horumarsan oo aan dib u rakibo VIBEUI ……
Huawei Watch ayaa si dhakhso leh loo sii deyn karaa
Mozilla waxay xannibtaa dhammaan noocyada Flash ee Firefox